चिसो मौसमा हृदयाघातको खतरा कति हुन्छ ? सतर्कता अपनाउन केके र्गनु पर्छ ! यस्ता छन् बच्ने नौ उपायहरू ?
प्रकासित मिति : ४ मंसिर २०७७, बिहीबार प्रकासित समय : २०:५०
तपाईंलाई चिसोको समयमा रक्तचाप (ब्लडप्रेसर) बढेको छ ? यदि छ भने समयमै चिकित्सकसँग जाँच गर्नुहोला । बेवास्ता गर्नुभयो भने ज्यानै पनि जान सक्छ ।
जाडोमा अन्य समयभन्दा ३० प्रतिशत बढी हृदयाघातको सम्भावना रहने भन्दै चिकित्सकले सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएका हुन्।चिसो भएपछि रगतको नली खुम्चँदै जाने र रक्तचाप बढ्ने भएकाले विशेष सावधानी अपनाउन चिकित्सकले सुझाव दिएका हुन् । चिकित्सकका अनुसार रक्तचाप जति बढ्यो मुटुका धमनी पनि बिग्रंदै जान्छ ।
मुटुरोग विशेषज्ञ डा. प्रेमराज वैद्यले जाडो भएपछि चिल्लो र गुलियो बढी खाँदा सुगर र कोलेस्ट्रोल बढेर हृदयाघात हुने सम्भावना रहने बताए। उनले भने, ‘जाडोमा अन्य समयभन्दा ३० प्रतिशत बढी हृदयाघात हुने सम्भावना रहन्छ । यस्तै, अन्य समयभन्दा २० प्रतिशत बढी पक्षघात रहने सम्भावना रहन्छ ।
चिकित्सकहरूका अनुसार जाडोको समयमा घाम कम हुने भएकाले भिटामिन डीको कमी भई अन्य समयभन्दा ५ प्रतिशत बढी हृदयाघात हुने सम्भावना रहन्छ ।
वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा. हरिहर खनालले मानिसको जीवनशैलीका कारण ‘सडेन कार्डिएक डेथ’ हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘जीवनशैली, तनाव, अल्छीपना, मोटोपनाका कारण हृदयाघात हुने सम्भावना बढी हुन्छ त्यसैले जीवनशैली परिवर्तन गर्न जरुरी छ । मुटुको समस्या देखिए तुरुन्त अस्पतालमा जानुपर्छ ।
१- युवामा किन
बरिष्ठ मुटुरोग सर्जन डा. भगवान कोइराला भन्छन्, ‘युवाहरूमा हृदयाघात देखिनुको प्रमुख कारण नै धूमपान, मोटोपन र अस्वस्थ जीवनशैली नै हो । उनका अनुसार ४० वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई हृदयाघात देखिएको छ भने तीमध्ये ९८ प्रतिशत व्यक्तिहरू धूमपानको लतमा रहेको पाइन्छ । बाँकीमा भने अन्य समस्याका कारण हृदयाघात भएको हुनसक्छ।
डा.कोइरालाका अनुसार सहरीकरणसँगै फेरिँदो जीवनशैली र खानपानमा भएको अनियमितताले मानव शरीर दिनानुदिन अस्वस्थकर बन्दै गएको छ। सुविधाजनक जीवनशैली र अस्वस्थकर खानपानले मानिसहरूलाई कोलेस्टेरोल, मोटोपन र उच्चरक्तचापजस्ता हृदयाघातका कारणलाई जन्म दिइरहेको छ।
‘विकसित देशको सुविधाजनक जीवनशैली र खानपानको नक्कल गर्दा अस्वस्थकर खानपिन र बढी सुविधाभोगी बन्ने होडबाजीले हृदयरोगीको संख्या बढाइरहेको छ’, डा. कोइरालाले भने, ‘झन् युवापुस्तामा धूमपानको लतले त कलिलै उमेरमा रोगी बनाउन थालिसकेको छ।
गंगालाल अस्पतालको गत वर्षको तथ्यांकअनुसार अस्पतालमा ११८८ जनाको हृदयाघातको उपचार गरिएको थियो। तीमध्ये २७ प्रतिशत अर्थात् ३ सय ३१ जना महिला थिए। सन् २०१२ मा त अस्पतालमा झन् ३४ प्रतिशत महिलाको हृदयाघातको उपचार गरिएको थियो। अस्पतालका चिकित्सक डा। केसीका अनुसार महिलामा हृदयाघात बढ्नुको प्रमुख कारण महिलामा हुने मोटोपन र शारीरिक अभ्यासको कमी हो नै।
यसका साथै महिनावारी सुकेपछि महिलामा सुरक्षात्मक हर्मोनको कमी हुनु र शारीरिक अभ्यासको निष्कृयताले मुटुरोग जन्माइरहेको उनको भनाइ छ।
‘नेपालमा युवामा हृदयाघात ह्वात्तै बढेको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘पाँच वर्षअगाडिसम्म समाजमा एउटा स्थान बनाइसकेका व्यक्ति वा ४० वर्ष पार गरेका व्यक्तिलाई मात्र यो रोग लाग्ने गरेको थियो । तर आजकाल १७ वर्षदेखि माथिका युवा र समाजमा स्थान बनाइनसकेका गरिबमा पनि हृदयाघात बढेको छ।
२- हृदयाघात के हो
तर, यी रक्तनलीभित्र विभिन्न कारणबाट बोसो जमेर ९कोलेस्टेरोल० साँघुरो हुने गर्छ। जसका कारण मुटुमा रगतको प्रवाहमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ र मुटुका मांसपेशीमा पर्याप्त मात्रामा ग्लुकोज र अक्सिजन पुग्दैन। यसबाट बिस्तारै कोरोनरी रक्तनली पूरै बन्द हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
यदि रक्तनली पुरै बन्द भएको खण्डमा रगतको प्रवाह पनि पूरै बन्द हुन्छ र मुटुमा ऊर्जाको आपूर्ति ठप्प हुन्छ। मुटुमा ग्लुकोज र अक्सिजनको आपूर्ति नभएपछि मुटुको मांसपेशी क्षतिग्रस्त हुन थाल्छ र यो क्रम लम्बिदै गएमा मांसपेशी मर्दछ र काम गर्न छाड्छ। यो अवस्थालाई हृदयाघात भएको भनिन्छ।
३ -हृदयाघातका कारण
४ -चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थको अत्यधिक प्रयोग
५ -उच्च रक्तचाप
८- व्यायामको कमी
हृदयाघात भएका व्यक्तिले समयमै उपचार नपाए रोगीको तत्काल मृत्यु हुन सक्छ। हृदयाघात हुने लगभग एकतिहाइ मान्छेको अस्पताल नै पुग्न नपाई मृत्यु हुन्छ। हृदयाघातपछि अस्पताल पुग्ने ९० प्रतिशत बिरामी सामान्यतया बाँच्ने गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ।साभार : स्वास्थ्य खबर डक कम